Sava sy Diana: Napetraka ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:44
Ny Ministra sy ireo Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany voatendry.
Accueil/Toekarena/Sava sy Diana: Napetraka ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany
Sava sy Diana: Napetraka ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany
Tafapetraka soa aman-tsara ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany ho an’ny Faritra Sava sy ny Faritra Diana. Ho an’ny Faritra Sava, Andriamatoa Tiandrazana Fortinant Issouf sy Ramatoa Marinasy Edith Virginie, misahana ny Faritra Diana.
«Hatramin’izay dia Tale iraisam-paritra tany Antsiranana iray ihany no nisahana ny fikarakarana antontan-taratasy momba ny sehatra harena an-kibon’ny tany ho an’ny Faritra roa Diana sy Sava hany ka sahirana ny olona amin’ny tsy maintsy mandeha lavitra. Ankehitriny kosa dia samy manana Talem-paritra misahana azy avy ny Faritra Sava sy Diana ka antenaina fa hanala fahasahiranana ny mpisehatra eny ifotony izay voatery mihazo an’Antsiranana raha hanao taratasy »,
hoy ny fanazavan’ny Minisitra tomponandraikitra Fidiniavo Ravokatra.
Fanamby napetraky ny Filoham-pirenena ny fampandrosoana ny Faritra rehetra manerana an’i Madagasikara tsy ankanavaka. Ho an’ny Faritra Sava sy Diana, nanatanteraka fitsidiham-paritra tany Sambava, Vohémar, Antsiranana nandritra ny roa andro ny solontenan’ny Governemanta roa lahy nahitana ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Fidiniavo Ravokatra sy ny Minisitra Lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny fonenana Angelo Zasy, nomban’ny delegasiona notarihin’izy ireo avy. Tonga nifanotrona tamin’izy ireo hatrany ireo tomponandraiki-panjakana izay nahitana ny avy amin’ny Governoran’ny Faritra, « Préfet », Ben’ny Tanàna, Loholon’i Madagasikara, ireo Talem-paritra an’ny Ministera isan-tokony.
Ankoatra ny fanendrena tompon’andraikitra, anisan’ny zava-dehibe ny fampitaovana, koa natolotra ny Talem-paritra Diana ny anjara fiara 4×4 hanatontosana ny asa. Fiarakodia izay isan’ireo 10 nozaraina ho an’ny « Police des Mines » manerana ny Sampandraharaham-paritry ny harena ankibon’ny tany rehetra.
Hatsangana ny Bureau d’Administration Minière (BAM) ao Vohémar
Hatsangana any Vohemar ihany koa ny Bureau d’Administration Minière na ny BAM. Nitsidika ny toerana ao Andranomasikely 1, hananganana izany fotodrafitrasa izany ireo tompon’andraikitra, ho fanamafisana ny fanaraha-maso ny asa misehatra anatin’ny harena an-kibon’ny tany. Ny Kaominina Vohémar no nanolotra ny tany ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny tanàna. Ny BAM (Bureau d’Administration Minière) dia sampana miankina amin’ny Talem-paritra, ary apetraka eny anivon’ny distrika, na kaominina raha toa hita izay filàna izay. Anisan’ireo BAM miisa dimy tafiditra anaty fandaharan’asan’ny Ministera tomponandraikitra ny fanorenana izany any Vohémar.
Netanina ireo mpisehatra amin’ny harena ankibon’ny tany
Mitohy hatrany ny fanentanana ireo mpisehtra amin’ny harena ankibon’ny tany hiroso amin’ny sehatra manara-dalàna mba samy hahazoan’ny rehetra tombontsoa. «Tsy azo ekena, raha toerana isan’ny lohany amin’ny fitrandrahana volamena no anjakan’ny gaboraraka. Anisan’ny antoka iray hahafahana mifehy ny lalan’ny volamena ny fitrandrahana azy ao anaty sehatra ara-dalàna», hoy ny Minisitra. Nisy ny fifanakalozan-kevitra niaraka tamin’ny mpandraharaha misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany sy ny fiarahamonim-pirenena tao Antsiranana. Niara-nijerena ireo olana mateti-pitranga. Ohatra amin’izany ireo mpanodina vatosoa (Artisans Lapidaires), ka misy ny olana ateraky ny fampidirana vato « synthétiques » avy any ivelany izay mamono ny tsenam-barotra vatosoa fiveloman’izy ireo. Ireo mpitrandraka volamena madinika avy any Betsiaka Ambilobe, izay mangataka « prix de référence » amin’ny vidin’ny volamena satria vidian’ny mpanangona amin’ny vidiny mora ny volamena sady mangala-danja. Misy ny mpisehatra te hiditra amin’ny sehatra ara-dalàna saingy mangataka ny hanamoràna ireo dingana tokony hatao.
Ady amin’ny coronavirus, nivory niaraka tamin’ny CRCO
Iaraha-mahita ny fitomboan’ny isan’ireo olona marary vokatry ny fiparitahan’ny coronavirus any an-toerana. Nisy ny dinika niarahan’ny Minisitra tamin’ny CRCO isaky ny toerana notsidihana, nijerena ny zava-misy, ny mbola tsy ampy hiatrehana ny valanaretina tany amin’ireo toerana rehetra nolalovana. Tany Sambava, nisy ny fiaraha-mijery ifotony sy fihaonana tamin’ny tomponandraikitra ao amin’ny ivon-toeram-paritra fitokana-monina sy fitsaboana ireo mararin’ny Coronavirus (centre d’isolement COVID-19) tao Sambava. Marihana fa biraon’ny Sampandraharaham-paritry ny BCMM Sambava no navadika vonjimaika handraisana izany toeram-pitokanamonina izany.
Fitsidihina ny CRCO
FANATSARANA NY SEHA-PIHARIANA RONONO : Hanafatra ombivavy beronona 1000 isa ny Fanjakana
MIVOAKA SY MIDITRA ETO MADAGASIKARA: Mahazo alalana manokana ireo iraka manokan’ny Fanjakana, masoivoho, …
FIARAHAMIASA AMIN’NY BAD: Orinasa madinika sy salantsalany miisa 300 hisitraka tohana